Frantsa : #harcelementderue, Ilay Tenifotra Mitantara Ny Fanaovana Zinona Ny Vehivavy Amin’ny Andavanandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2012 13:50 GMT
Satria nalam-baraka sy nompain'ireo lehilahy teny an-dalamben'i Bruxelles ny tovovavy Belza iray mpianatra, Sofie Peeters dia namokatra lahatsary iray tamin'ny alalan'ny fakàna sary miafina [nl] mba hiampangana ny fanambaniana vehivavy ataon'ny lehilahy isan'andro an'ireo vehivavy mandeha irery eny an-dàlana eny. Ny sarimihetsika novokariny dia niteraka resa-be tao Belzika ary avy eo tao Frantsa. Eo ambanin'ny tenifototra #harcelementderue, (filam-baniny an-dalambe) mijoro vavolombelona amin'ny filam-baniny amin'ny fiteny sy ny resaka filan'ny nofo, ny ompa zakain'izy ireo eny an-dalambe ireo vehivavy Frantsay.
Dom B. ao anatin'ny lahatsorany “Machisme ordinaire : non messieurs, dire “t'es bonne” n'est pas un compliment” “Fanambaniana vehivavy tsotra: tsia ramose isany, tsy fandokafana mihitsy ny fitenenana hoe “manja ianao” dia misaotra an'i Sofie Peeters noho ny adihevitra notairiny :
Ilay lahatsary fanadihadiana avy aminà vehivavy Belza iray mpianatra, nomeny lohateny hoe “Vehivavin'ny làlana“, dia mampiseho amin'ny alàlan'ny fakàna sary miafina ny filam-baniny amin'ny filàna ara-nofo izay mahazo azy isan'andro. Avy aminy no nanainga indray ny adihevitra.
Ilay bilaogera Sandrine dia mampahatsiahy fa ao Frantsa koa :
Ho porofo, ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny vehivavy iray ao amin'ny gazetiboky anaty aterineto madmoizelle, izay itanisany ireo kiana sy tolo-kevitra mivantambantana ary ompa zakaina eny an-dalàmbe, dia niteraka “fankafizana” maherin'ny 10.000 tao amin'ny Facebook :
Tsy takatr'ireo lehilahy mihitsy, na zara raha. Lehilahy frantsay iray mpikirakira aterineto mihitsy aza, @mathieuge, izay misalasala ihany toy ireo lehilahy maro manoloana ity resabe ity, no nitarika ny fahaterahan'ilay tenifototra #Harcelementderue tamin'ny alàlan'ity bitsika ity :
Nihetsika kosa @valerieCG tamin'ny fandefasana antso ho fijoroana vavolombelona :
@valerieCG : “Raha toa ianao efa niharan'ny filam-baniny teny an-dalambe dia isaorana indrindra amin'ny fitenenana izany amin'ny alàlan'ny #harcelementderue mba hanehoana amin'i @mathieuge ny maha-zava-dehibe an'io tantara iray io.”
@Agnesleglise nihiaka ny hoe :
@Agnesleglise : “@valerieCG @mathieuge izay mbola tsy niharan'izany no aoka hiteny, haingankaingana kokoa angamba izay (raha hisy) #harcelementderue“
Ora roa taorian'ny nandefasana azy dia laharana faha-4 tamn'ireo lohahevitra noresahana be tao amin'ny Twitter amin'ny teny Frantsay, ary mitohy miteraka hatrany, herinandro iray aty aoriana, fijoroana vavolombelona miraradradraka, hatramin'ny lahatsoratra fampisaintsainana marobe. Tsy maintsy tsipihana fa ao Frantsa, hatramin'ny raharaha DSK, mivaha ny vavan'ny vehivavy ary mitolona amin'ny alàlan'ireo tenifototra ao amin'ny Twitter, izay maka ny toeran'ny mpanentana, mandray ny faneva indray avy eo ireo mpampahalala vaovao nahazatra.
Aza gaga ianareo hoe tsy resahana mihitsy ny #harcèlementderue [rehefa mamaky ny ao amin'ny Twitter] :
- RT @El_Mehdiiii “Inona koa ity tenifototra #HarcelementDeRue ity, ny sasany mahita vehivavy manja, dia mba mitsapa ny vintany ry zareo. Voajanahary be izany ary samy manao izany daholo ny zava-mananaina. ” ET
- RT @LuneHolmes ” misy ny hoe herisetra sy herisetra. Bandy iray mandalo eo akaikinao ary miteny hoe “salope”, tsy herisetra izany, miala tsiny.”
Ireo fanakianana manavaka ny lahy sy ny vavy (sexistes) na ireo manamaivana ilay olana dia naverin'ny olona amin'ny toerany, ohatra ny an'i @Mel036 :
Ilay tsy misy saina tsy mahatakatra na inona na inona momba ny #HarcelementDeRue sy mino fa hoe sahiran-tsaina ny olona amin'ny fikaotikaotiany. Tsia, noho ireo ompa sy herisetra amin'ny teny …Ary izao koa zalahy a, zo ve ny mihevitra hoe tsy toeram-pihazàna ny arabe, natao hikaotiana izay sipa mandalo voalohany eo?
Taorian'ireo fijoroana vavolombelona, nanjary seha-pifanakalozana fisaintsainana ny Twitter. Nahoana ny vehivavy no mizaka foana herisetra amin'ny teny sy voaompa eny an-dalambe? Valinteny iray ankoatra ireo hafa ny an'i @SexismAndTheCT :
Ny #harcelementderue dia natao hampahatsiahivana ireo vehivavy “mandeha irery” fa zavatra toy ny fanaka izy ireny ary ny filaminan-tsainy dia tombony omena azy, fa tsy zo.
Bonnequestion manolo-kevitra hoe :
Hanoherana ireo fanamarihana izay mampibaby an'ireo mpifindra-monina ny ankamaroan'ireny ompa an-dalambe ireny, mampahatsiahy i @elodieesc fa ny filam-baniny dia mahazo làka eny amin'ireo làlana be mpampiasa toy ireo tanàna manana ny hakantony sy ny fitateram-bahoaka iraisana :
#harcelementderue eo ireo bandy mba manome toky anao manoloana ireny zava-tsy maoty ireny eny ampovoan'i Neuilly, ny mpikitikitika ny lohalikao any anaty RER sy ny hafa tsy tsaroana …
@Oniromanie manampy :
Singa iray kidaladala tanteraka : ireo mpivenjivenjy an-dalambe, dia ireo mahantra. Ny mpanankarena dia any anaty efitrano na any amin'ny Antenimiera[m-pirenena] no mila vaniny / mikaoty.
Mamaly izany i Dom B. :
Anjaran'ireo mpahay fiarahamonina, filoazofy, mpanao politika, manampahaizana manokana no manadihady sy manazava izay anjara raisin'ny fivavahana, amin'ny vesatry ny fahasorenana momba ny firasana ara-nofo nentin'ireo fepetra fandraràna apetrany mba hiainana miaraka na ny fahasamihafàna ara-kolontsaina, miohatra amin'ny fikororosin'ny fanabeazana.
Raha ho an'i @Hans_Bod, tàkany amin'izay ny antony tsy itiavan'ny vehivavy ao Frantsa hokaotiana eny an-dalambe :
Isaorana ny #harcelementderue , takatro amin'izao fotoana ny antony rehefa miteny Arahaba aminà sipa iray tsy fantatro aho eto Frantsa, ny fahatsapako dia ny fiheverany ahy ho mitady hanolana azy.
Tonga indrindra ity resabe ity amin'ny fotoana izay nanamafisan'ny filohan'ny repoblika lalàna iray vaovao momba ny filam-baniny momba ny firaisana ara-nofo. Ny 3 Aogositra, Najat Vallaud-Belkacem, Minisitra miahy ny zon'ny vehivavy ary mpitondra tenin'ny governemanta no nandefa ity bitsika ity :
#harcèlementderue: hihatra na aiza na aiza ilay lalàna vaovao. Zava-dehibe ny fanalalahana ny fahafahan'ny vehivavy miteny. Ndao hihetska foana !
Mihetsika, tokony hitazona an'izay ny vehivavy Frantsay : ao amin'ny bilaogy Les Martiennes, fantatra fa tsy mipetrapetraka mihitsy ireo mpanavakavaka amin'ny maha-lahy na vavy (sexiste), manontany tena i Crêpe Georgette raha tsy maintsy asiana fampianarana manokana ho fanabeazana manohitra ny ‘sexistes’ hatrany amin'ny garabola, ary ny tranonkala Génération réactive dia manandrana ny mandeha lavidavitra kokoa amin'ny fametrahana ity fanontaniana ity :